ISuper Mario Run izungezwe impikiswano nezibuyekezo ezimbi | Izindaba zamagajethi
ISuper Mario Run izungezwe impikiswano nokubuyekezwa okungalungile ku-App Store
Isiko lokungakhokhi. Kunezicelo eziningi ezandayo esizithola ku-AppStore futhi ezithi "mahhala", yize sekuvele kwaziwa, uma ungawukhokheli umkhiqizo, kungenxa yokuthi umkhiqizo nguwe. Kulokhu futhi ngaphandle kokuthi besikhuluma ngemininingwane yeSuper Mario Run amasonto, Kubukeka sengathi kunabasebenzisi abaningi ababengakakwazi ukuthi iSuper Mario Run ayikhululekileUngajabulela amazinga alo okuqala amathathu kuphela uma ungatholanga inguqulo ephelele engaphansi kwama- € 10, ukuthenga okuhlanganisiwe okungathandanga abaningi nokwadala ukudideka kumanethiwekhi, okudala imiphumela emibi engapheli.
Futhi esithombeni sikanhlokweni singathola eziningi zalezi zibuyekezo abasebenzisi be-iOS abangazazi bebelokhu bethela kulo mdlalo ezinsukwini zamuva. Ngeke singene ekuboneni ukuthi i- € 10 ngomsebenzisi iyifanele yini (ngoba awukwazi ukusizakala ngohlelo lokuthenga lomndeni), kodwa iqiniso lokuthi abantu bayakhalaza ngoba alikho mahhala ngokuphelele. Sibhekene nomdlalo wevidiyo oyingqayizivele, iSuper Mario, ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lokukhangisa olunamathele kuhlelo lokusebenza, ngakho-ke njengomthetho ojwayelekile, umhlaba usebenza ngokukhokhela abantu ngomsebenzi wabo, kanti umsebenzi kaNintendo ukudala imidlalo yevidiyo, yingakho, kufanele ukhokhe u- € 10 ukuthola inguqulo ephelele yeSuper Mario Run, Amazinga amathathu okuqala omdlalo awalutho ngaphandle kweDemo ngenhloso eyodwa yokuvumela wonke umuntu azame umdlalo ngaphambi kokuwuthenga (noma ukubabamba kuwo, kuya ngokuthi uwubheka kanjani).
Icala okuzodingidwa ngalo ukuthi kungukuziphatha yini ukukhononda noma ukunikeza amaphuzu amabi emdlalweni wevidiyo ngoba nje awukhululekile, futhi umbono wami ucace cha kulokhu. Ngakolunye uhlangothi, kufanele sigxeke inkampani futhi sisho ukuthi basebenzise inqubo yakudala yokuhlwitha uswidi emilonyeni yethu. Noma kunjalo, ukukhokhela umdlalo wevidiyo weselula akuhlukile kunokukhokhela isiphuzo kubha engezansi, ikakhulukazi lapho bonke abezindaba benanela ngentengo yomdlalo amasonto.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » ISuper Mario Run izungezwe impikiswano nokubuyekezwa okungalungile ku-App Store
U-Apple uphoqeleke ukuthi atshale imali eyizigidi ezingama-44 zamaRandi ukuze akwazi ukuthengisa i-iPhone e-Indonesia
IDropbox izophela amandla okwabelana ngamafolda womphakathi